U-Apple uzokwazisa i-beta yokuqala ye-firmware ye-AirPods Pro | Ndisuka mac
UToni Cortes | 11/06/2021 14:00 | Izixhobo
Ngethuba lokuqala, i-Apple ikhupha i-AirPods firmware kwi isigaba se-beta ukuba abaphuhlisi bavavanye. Yonke into entsha.
Njengokuba yayiyisoftware, uApple uxele namhlanje ukuba kwiintsuku ezimbalwa izakukhupha i-beta yokuqala ye-firmware yeefowuni ze-Apple. Ngokukodwa, ziya kuba ze I-AirPods Pro. Inkampani ifuna ukuqiniseka ukuba ayizukungena bug ngaphambi kokukhupha ingxelo yokugqibela yabo bonke abasebenzisi. Oku kuyinto entsha, ngaphandle kwamathandabuzo.
Kwintetho yangoMvulo odlulileyo Tim Cook kunye neqela lakhe basicacisela izinto ezintsha eziza kwenziwa kwizixhobo zeApple kulo nyaka, behlaziya isoftware yabo. Kwaye njengokuba sele sazisa Kwiintsuku ezimbalwa ezidlulileyo, ii-AirPods nazo ziya kufumana uphuculo olukhulu nge-firmware entsha.
Kwaye iApple ibone kufanelekile ukuba olu phuculo kufuneka luvavanywe kakuhle ngaphambi kokukhupha i-firmware yabo bonke abasebenzisi. Ke njengayo nayiphi na isoftware, iya kukhupha i-beta ye-AirPods Pro firmware yabaphuhlisi kwiintsuku ezimbalwa. Iya kuba yi okokuqala makenze njalo.
Oku kuyakuvumela ukuphuculwa kwamanqaku amatsha kwi-iOS nakwi-macOS yee-AirPods, kunye nokwenza izinto ezintsha eziza kwenziwa kwikamva, kubandakanya Ukunyusa incoko (ukuyilwa kwesandi) kunye Ukuncitshiswa kwengxolo kokusingqongileyo (ingcinezelo yengxolo).
Inkampani khange iwunike umhla wokusungulwa okunje, kwaye ikhankanya kuphela i-AirPods Pro, ke ayicacanga ukuba ngaba i-beta firmware iya kubonelelwa ngee-AirPods kunye Ii-AirPods eziphezulu. Kuya kufuneka silinde iindaba ezingakumbi malunga noku.
Ngokucacileyo, zonke ezi zinto zintsha ziya kudityaniswa nohlaziyo oluhambelanayo iOS 15, I-iPadOS 15, kwaye IMacOS Monterey, Zonke sele zisungulwe kwisigaba se-beta ukusukela ngoMvulo odlulileyo kubo bonke abaphuhlisi be-Apple.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » Iikhompyuter zeMac » Izixhobo » Kungekudala iApple iza kuphehlelela i-beta yokuqala ye-firmware ye-AirPods Pro